Mari Yakakura: TinderBox | Martech Zone
China, June 23, 2011 Muvhuro, Kukadzi 4, 2013 Douglas Karr
About vhiki apfuura, DK New Media akawedzera TinderBox, a Chirevo Management Solution, kune yayo runyorwa rwevanokura vatengi. Ini ndakanyora nezve TinderBox pavakatanga kuvhura… uye munguva pfupi tangova mutengi wavo. Isu tinofara nekubatsirana nekuda kwesimba risingaperi remhinduro yavo.
The TinderBox kunyorera kwakanaka uye kwandichengetera maawa nemaawa enguva. Chaizvoizvo, ini ndakagadzira yemukati yekuchengetera nezvose zvechigadzirwa uye zvevhisi zvinopihwa isu zvatinopa. Sekutarisira kukumbira chikumbiro, chero timu yedu inogona kupinda ndokubata zvikamu zvatinoda, kushambadza chikumbiro, kumirira kuziviswa kuti tarisiro yakazviona, kupindura chero mibvunzo ... uye kuwana kugamuchirwa. Handina mubvunzo kuti software yacho pachayo yakabatsira kuvhara mamwe madhiri.
TinderBox inobvumira vashandisi kubata ese maficha ekugadzira zvinyorwa zvinosanganisira: kunyora, fomati, manejimendi, mvumo, uye kuteedzera kubva mukati meimwe nyore interface. Zvikwata zvakakura zvinogona kusona kusanganisa TinderBox mune zviripo CRM mhinduro senge Salesforce.com, ichivandudza mafambisirwo echikwata chavo uye vachideredza nguva yavo yekuvhara bhizinesi idzva. TinderBox parizvino ine vatengi munyika nomwe, vachitsigira mazano uye zvinyorwa mumitauro mina.
Nhasi, takafara kunzwa kuti TinderBox yakapihwa mari na HALO, danho redunhu rekudyara mumakambani ehunyanzvi ane mukana wakakura. HALO inomiririra Hoosier Ngirozi Kutsvaga Mikana. Techpoint inotarisira boka revarombo reHALO. Uku kudyara kunounza huwandu hwakazara hweHALO mumakambani eIndiana kusvika $ 17.1 miriyoni mumwedzi makumi matatu neshanu apfuura.
TinderBox ndeimwe mumutsetse murefu wemakambani ekuIndia-akakura pamba akaveza niches dzakakosha mukutengesa kwekutengesa uye yakayerwa nzvimbo yekutengesa. Mark Hill, HALO anotora chikamu uye sachigaro weTechPoint bhodhi revatungamiriri.
Iyo kambani inoenderera nekuwedzera zvisingaite maficha uye mashandiro - kusanganisira maSMS chenjedzo, Chirongwa Chekuchengetedza, Chirevo Templating (yaive mune yedu yazvino kusimudzira ... uye chimwe chinhu chatichazonyatsotora mukana), uye kuzara theming. Zvirongwa zvedu zvinotaridzika kunge zvakanaka uye tinogona kunyange kuisa mavhidhiyo mavari:
Heino vhidhiyo yekutanga. Ive neshuwa yekushanyira uye kusaina kune free trial!
Tags: online zano softwareproposalchikumbiro softwarechikumbiro chekutengesasales proposal softwaretinderbox
Nhoroondo yeSocial Networking
Jun 23, 2011 pa 4: 14 PM
Ndakaverenga zvishoma nezve TinderBox, asi zvakanaka kuti uone ichikura uye ichivandudza. Iye zvino kana chete TinderBox ichigona kuwana mhinduro kune inotyisa RFP.
Jun 23, 2011 pa 6: 00 PM
Ivo vane yakanaka nzira yekuchengetera yekutsvaga nekuchengetedza zvemukati. Ini ndinofunga iyo sisitimu inogona kushanda mushe kumaRFPs ... asi uchafanirwa kuenda nePro account kuti uwane zvese.
Jun 23, 2011 pa 8: 38 PM
Kutenda nekunakidzwa kutsigira Doug - isu tinofara kuve mutengi we DK New Media!